ILAHLEKILE KWISITHUBA SEXESHA LESI-3 AMARHE MALUNGA NOKUCINYWA KWAYO, IINDABA EZIZAYO, UHLAZIYO LWAMVA NJE KUNYE NEZINTO EZINOKWENZEKA EKUFUNEKA UZAZI - IINKQUBO ZETV
Ilahlekile kwisithuba seXesha lesi-3 Amarhe malunga nokuCinywa kwayo, iindaba ezizayo, uhlaziyo lwamva nje kunye nezinto ezinokwenzeka ekufuneka uzazi
Ukulahleka kwiSithuba seXesha lesi-3 bekuhlala kungenakuphepheka. Ngaphambi kokuba iNetflix ibhengeze ngokufanelekileyo ukufika kweziqendu ezizayo, iziqendu zazikhona
Ukulahleka kwisithuba seXesha 3 yayihlala ingenakuphepheka. Kwanangaphambi kokuba iNetflix ibhengeze ngokufanelekileyo ukufika kweziqendu ezizayo, iziqendu zazisele zisakhiwa.
Umbhali-mbhali uBurk Sharpless uthe abenzi bemiboniso bayakuvumela ukuba ubhale kuyo kodwa abasokuze basinike imvume de kube emva kokubhengezwa.
Inqanaba eliphezulu lokuzithemba lonyaka 2 linokubonwa ngokucacileyo kucwangciso lweNetflix. INetflix yaphosa uthotho ngobusuku beKrisimesi ngexesha lokubhabha.
Kodwa siya kukwazi nini ukubukela uLahlekileyo kwi-Space ngexesha le-3? Nantsi yonke into ekufuneka uyazi ngokufika kwexesha lokugqibela lomboniso.
Ukulahleka kwisithuba seXesha 3 Siya kukwazi nini ukuBukela okulahlekileyo kwiSithuba seXesha lesi-3?
Kubonakala ngathi Ngaba uRobinson ufuna ukuthatha oku ngentwana yetyuwa yendawo (kwaye ayisiyonto yenziwe). Ukucwangciswa kweNetflix komboniso yinto encinci engalindelekanga.
Ixesha loku-1 likhutshwe ngo-Epreli 2018 kunye nexesha lesibini elichithwe nje kwisicwangciso se-2019 ngoDisemba 24.
Ukusukela ukuba umboniso ubuya okwesithathu kunye nesavenge sokugqibela, lonke uxinzelelo luxhomekeke kwiqela leziphumo ezikhethekileyo zomboniso ukuba zisebenze ngokufanelekileyo.
izophuma nini ixesha le-3 yendoda enye yenqindi
Umhla wokukhutshwa ngandlela thile kubonakala ngathi kulindelwe ukuba imveliso izakulibaziseka ngenxa yobhubhane we-COVID-19.
Ngenxa yoku, silindele ukuba isizini yesithathu ayizukufika ngaphambi kuka-2021. Umhla wokukhutshwa uya kuba kwindawo ethile phakathi ku-2021.
Elahlekileyo kwisithuba seXesha lesi-3: Ngubani na oya kuthi aKhe aziinkwenkwezi ngokulahlekileyo kwisithuba seXesha lesi-3?
Akunakwenzeka ukuba ucinge elahlekileyo kwindawo ngaphandle kosapho lakwaRobinson. Ke ngoko, siqinisekile ukubona uMaureen (odlalwa nguMolly Parker) noJohn (odlalwa nguToby Stephens) bebuya.
Abantakwabo Robinson, uJudy (Taylor Russell), uWill (Maxwell Jenkins), kunye noPenny (Mina Sundwall) nabo baya kubuya.
Ngaphandle kwabo, silindele ukumbona uSibongile Mlambo njengo-Angela owayeluthotho oluqhelekileyo ukusuka kwisizini yesibini.
Siza kulindela ukuba ii-villains ezinomdla kakhulu zoluhlu, uParker Posey (ngoJuni Harris) kunye no-Ignacio Serricchio (Don West), babuyele kwaye babangele isiphithiphithi njengesiqhelo.
Yintoni eya kulahleka kwiSithuba seXesha lesi-3 esisizisela yona?
UTed Biaselli (umlawuli wechungechunge kwiNetflix) kudliwanondlebe kunye neendidi ezahlukeneyo wathi bonwabile ngokwabelana ngee-escapades zeRobinson Family ngelixa bengqinelana nexesha lesithathu ngaxeshanye.
Kwaye siza kubona uhambo lwabo ukuya esiphelweni ngesiphelo se-epic. Ngokuyintloko, banombulelo kuZack Estrin, Burk Sharpless, Matt Sazama, Kevin Burns, kunye noJon Jashni ngokuvavanya iLost Lost in Space.
Oku kuzise abaphulaphuli iprimiyamu yokugquma kunye nokubonwa kothotho olothusayo olunokonwabela iintsapho kunye. Abakwazi ukulinda ababukeli bosapho lwabo ukuze babone ukuba ixesha lesithathu liya kubathatha nini.
Iimuvi ezifanayo nesiqithi se-shutter
Umboniso izakuqhubeka nokukhula kwisizini yesithathu kodwa nantoni na eyenzekayo kwixa elizayo, iRobinsons iya kuba yeyona nto iphambili kuyo.
Ukulahleka kwisithuba seXesha lesi-3: Ngaba sikhona isiQendwana esiPhumayo ngoku?
Ixesha lesibini le-trailer liphume kwangoko, ngo-Okthobha u-2019, ke silindele ukubona ukujonga kokuqala kwexesha lesithathu kwindawo enye ngexesha elinye ngo-2020 mhlawumbi kwi-Ney York Comic-Con. Naleyo kuphela ukuba imveliso ayihambi ngokulibaziseka ngenxa yemeko eqhubekayo.
Nangona kunjalo kuvela, umboniso uhlala usishiya sifuna okungakumbi. Masibe nethemba lokuba amaxesha onyaka azayo nawo aya kuthwala ii-vibes ezifanayo.
Ixesha le-She-Hulk 1 yokuKhutshwa komhla, Ngubani kwiCast? Iqonga leTrailer kwaye yintoni ngakumbi malunga noMdlalo?
Abaphangi Phambi kweNarcos Mexico Ixesha lesibini leendaba ezizayo, ezinokwenzeka
Izinto ezingaMangalelwa eziTyholwa ngokuThintela ibali lalo-ngoku lenziwe kwilungelo lokushicilela elungelo lokushicilela
Abakhweli beMonster Hunter-Isibhengezo esisemthethweni sityhila iTrailer kunye noHlaziyo oluNtsha awufuni kuphoswa
I-Kung Fu Panda 4 Fumana lonke uhlaziyo lwamva apha
Ixesha elitshintshiweyo leCarbon 2- Ukungenelela [CAST], uHlaziyo lwamva nje, uthotho lwempikiswano, kuya kufuneka ungene nzulu ngeli xesha lonyaka
ikhowudi yomhla womoya
Ngaba kuya kubakho ixesha le-magi 3
Eyona midlalo bhanyabhanya ye-anime yango-2013
Ixesha lamatye le-3